Izinto ezenziwa abantu ekuphathweni - lokhu kubangela eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa, okuyinto zibangelwa ukungafani isimo psychophysiological futhi ubungoti nge nezidingo.
Izinto ezenziwa abantu ekuphathweni izinga, ngezigaba yabangelwa yiphutha lomuntu, nokuhlaziya izenzo yokuphambuka
Ngo ekuhlaziyweni womuntu-ubuchwepheshe iphutha izinhlelo opharetha labelwe 4 izinhlobo izenzo eyiphutha: ukudlula izinyathelo ezidingekayo, ukwephulwa kwamalungelo isenzo oda (permutation), othomathikhi uphinda isinyathelo kakhulu okuyothi lapho sigcwaliseka okokuqala akazange kuholele elamukelekile, kanye nokusentshenziswa kwe isenzo esisha, okungahlosiwe algorithm aqine.
Kuye mode yomsebenzi, amaphutha singenzeka ezingeni amakhono ezingeni imithetho kanye ezingeni ulwazi.
Isici Human noma amaphutha ayisibonelo ngoba amakhono Mode (inattention)
Iphutha imodi ngenkathi kwenziwa umsebenzi ezingeni amakhono - kuba inattention. Amaphutha amakhono operation - ngokuyisisekelo kuvunyelwe lapho kukhishwa izenzo, kuhlanganise nezenzo eziyiphutha nokuntula usizo noma emakamu.
Iphutha Human noma amaphutha ukuthi ayisibonelo salezi umsebenzi imithetho wokusebenza
Njengoba ukuqaliswa imithetho ikumodi imisebenzi kudinga incazelo nokusetshenziswa "uma - ke" ifomula, iphutha evamile iyi incazelo okungalungile. Umuntu angeke alithole ngokugcwele noma ukunquma ngendlela efanele isimo imishini noma izindawo ezidinga impendulo ethile.
Iphutha Human noma amaphutha ukuthi ayisibonelo salezi umsebenzi imodi yolwazi
Imisebenzi eyenziwa imodi yolwazi, zidinga uphethwe nekusombulula izinkinga. Umuntu kudinga imizamo eside phezu ukucutshungulwa kolwazi, lapho kubalulekile ukuhlaziya isimo ngokubhuduzela, eziqala zezimbangela. Akumangalisi ukuthi umuntu kungenzeka zingasebenzi kahle ezimweni yokucindezeleka okukhulu, ezimweni ezingajwayelekile lapho udinga ukuba abakhuthele ngokungabi bikho imithetho, izinhlelo kanye nezinqubo ngawo Esimweni esinjalo kufanele alungiswe.
Ukuthathwa kwezinqumo ngokukhishwa akulungile, uma isinqumo yenkinga kusekelwe ulwazi olungalungile.
Izinto ezenziwa abantu, ngezigaba izimbangela bomshayeli
Iphutha (namaphutha) Ukuhlela
Amaphutha kungenzeka wavuma ezingeni lokuhlela noma ngesikhathi sokwenza lelo hlelo lisebenze ipulani. amaphutha Ukuhlela kuholele amaphutha: indoda noma inqubo okungafanele ukuxazulula izinkinga ejwayelekile, noma izinqubo zokuhlela singenele ngoba kokugunyazwa isimo esisha.
Amaphutha kungenziwa uzibophezele ngezindlela ezimbili, okungukuthi, ngokusebenzisa imithetho isimo non-azivumelanise, futhi ngenxa isicelo efanele imithetho, esesikhundleni nemibi.
isicelo yokuphambuka imithetho efanele
Esimweni esinjalo ngokuvamile kunjalo, uma u-opharetha is ubhekene nesimo lapho eziningi izici zayo futhi usesimweni esifanayo, okuyiwona kokubusa yayihloselwe, kodwa abanye umehluko omkhulu. Uma opharetha ayiyingeni umehluko obalulekile, singasebenza ngokuvamile ingafaneleki.
Ukusetshenziswa imithetho abangaphelele
Lokhu kwenzeka uma usebenzisa izinqubo okuyinto esikhathini esidlule kwanika imiphumela emihle, kodwa iqukethe yokuntula alibonwa. Uma ikhambi elinjalo isetshenziswa izimo lapho luvivinywa okokuqala, kungaba yingxenye indlela ejwayelekile yomuntu ukuxazulula lolu hlobo nkinga.
Ukwenza amaphutha (amahlumela nokweqiwe)
Njengomthetho, isenzo i izisebenzi ezinolwazi afanelekayo onekhono futhi olususwe. Imisebenzi abazenzi ikakhulukazi ngendlela okuzenzakalelayo, ngaphandle kokuhlolwa ngezikhathi ezithile ijubane inqubo. Kodwa, ngeshwa, kukhona amaphutha kanye baphawula okubangelwa ngabasebenzi. Slip kuyinto isenzo esingavunyelwe kwenziwe njengoba kwakuhleliwe, ngakho ngaso sonke isikhathi kuyoba iphutha ebonakalayo. Okhohlwa kuyehluleka inkumbulo, futhi ngeke ngempela kube sobala kubo bonke abanye, ngaphandle komuntu kusuka kwenzeka bani.
Amaphutha kanye ukwephulwa
Amaphutha ezibhekwa evamile umsebenzi izisebenzi futhi ngokuphelele ezahlukene kusukela ukuphulwa. Lezi zici ezimbili kungaholela ukwehluleka lonke uhlelo, noma ukudala isimo esiyingozi. Umehluko phakathi kwabo siqukethe kuphela ngenhloso. Ukwephulwa kukhona isinyathelo ngamabomu, namaphutha zenzeka engahlosile.
izici Human kuthathwa izinyathelo zokulungisa
amaphutha okungaqondiwe: Lolu hlobo iphutha kungagwenywa ekuthuthukiseni ukuqeqeshwa, izinqubo noma kokungenela manual (isibonelo, ukwanda ukulawula, ukuhlaziya imisebenzi, ukuchaza ukungaqondani wokubuyekeza izigaba lokukhulu kuletinye nezinqubo nokugqugquzela isimo sengqondo sokunganaki abasebenzi ekwenzeni imisebenzi).
ukwephulwa ngamabomu: Lolu hlobo iphutha kungagwenywa ukuthuthukiswa ukuziphatha oyifunayo kanye nokuqaliswa isiko lokuphepha eqinile.
Amaphutha lusekelwe olwazini: zalezi zinhlobo amaphutha kungenziwa yokuvinjelwa okuthuthukayo ngesidingo ayeke umsebenzi, ukubandakanya abanye abantu ukucela usizo / iseluleko uma umsebenzi akazi ukuthi ukwenza endaweni engajwayelekile.
Ukuthuthukisa ulwazi kwabasebenzi kuyisici ezengeziwe ezithinta ikhwalithi ukusebenza zokuphatha.
Ukushintshwa kwemisebe ongakhetha izingubo i stylish ubudala
UBrezhnev Andrey Yuryevich - umzukulu lo uNobhala Jikelele we-CPSU Central Committee Leonida Ilicha Brezhneva